En vente actuellement 20/11/2018
Archive du 20/11/2018
Ireo sakafo mampitony kibo nidiran’ny rivotra
Marary sady tsy mampahazo aina mihitsy rehefa tafiditry ny rivotra ny tsinay. Azo tsaboina sy ampitoniana amin’ny alalan’ny sakafo izany.
Mpikarakara ireo mararin’ny Alhzeimer Mila mifampizara sy mifanakalo hevitra
Tsy ireo mararin’ny aretina Alhzeimer ihany no mijaly amin’ity aretina ity, fa ao anatin’ny miady amin’ity aretina ity indrindra ihany koa ny fianakaviana sy mpikarakara mitaiza azy.
Ny tsiambareton-dry Elvis Presley, Bob Marley…
Na dia efa henika izao tontolo izao aza ny lazan’ny ankamaroan’ireo mpilalao sarimihetsika sy mpanakanto dia misy ihany ny zavatra momba azy ireo no mbola tsy fantatry ny maro. Santionany amin’izany ireto zaraina aminao ireto.
Fanaingoana fitaovana handraisana fety
Andeha homanina dieny izao ny fandraisana ny fety. Raha toa ka lovia sy kaopy fotsy ranoray no ao an-tranonao dia azo atao ny manaingo azy ireny mba haka ny lokon’ny krismasy.
Shopping « Sacs »
Sac Gucci sur commande « Kalajejou Tia Vao » 32x16x12 cm 2. Sac Givenchy (plusieurs coloris disponible) MM : 120.000Ar Cont : 034 81 858 08
« Lime » sa « coupe ongle » no tsara ho an’ny hoho ?
Teknika roa samy hafa, saingy samy azo hamoretana ny hoho avokoa na ny fampiasana
#NousToutes : vondrom-behivavy manohitra ny herisetra
Olo-malaza miisa 250 any Frantsa no nivondrona ao anatin’ny #NousToutes, vondrom-behivavy iray manohitra ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy.
Tsy avelan’ireo mpino hiditra am-piangonana ny vehivavy ao Inde
Maherin’ny 70 ireo nosamborina tao Kérala vokatry ny fihetsiketsihena teo anoloan’ny fiangonana “hindou” any an-toerana izay vao nosokafana ho an’ny vehivavy.
Lehilahy iray maty voakaikitry ny trondron-dranomasina tany Aostralia
Lehilahy mpilomano iray no maty voatsindron’ny biby miaina ao anaty ranomasina tany atsimon’i Aostralia ny asabotsy lasa teo.
Manana olon-tiana aho, efa roa taona izahay no niaraka.
Matetika anefa aho no ilàny vaniny ary misy fotoana aza, tsy hitako izy, mandritra ny roa volana. Fantatro, taty aoriana, fa manana sipa hafa izy. Rehefa misaraka aminy anefa aho, dia tsy mety izy. Izy rahateo mbola tena tiako. Tokony hisaraka aminy ve aho ?
Ananambo : Miady amin’ny aretin’aty, aretim-po,…
Anana mitondra voka-tsoa betsaka ho an’ny fahasalamana ny ananambo noho izy manan-karena otrikaina. Miady amin’ny aretina samihafa toy ny diabeta , ny aretin’ny fo sy ny lalan-dra, ny aretin’aty ihany koa izy ity. Ankoatra izay dia mitazona ny fitadidiana koa itony anana itony.